Mandrahona hitokona… : manome 72 ora ny fanjakana ny mpandraharahan’ny fonja | NewsMada
Mandrahona hitokona… : manome 72 ora ny fanjakana ny mpandraharahan’ny fonja
Hanao fanambarana, eny Antanimora, ny sendikan’ny mpandraharaha ny fonja, anio, momba ny fitakian’izy ireo. Araka ny fanazavana azo avy amin’ny sendikà, manome 72 ora ny fanjakana izy ireo hamaliana ny fitakiana rehetra. Fanamboarana ny fonjan’Antanimora, ny tambin-karaman’izy ireo izay efa tsy manaraka ny vanin’andro ankehitriny, ny fanomezana fiara vaovoa hitaterana ireo olona tsaraina eny amin’ny fitsarana, ny fanomezana fanamiana vaovao, sns.
Araka ny fanazavana azo, tsy nisy voavaly mihitsy izay notakin’ireo mpandraharaha ny fonja, kanefa efa nisy an-taonany sy am-bolana ny nanaovan’izy ireo izany. Voalaza fa efa nilaza ny hamaly izany hetahetan’ny mpandraharaha ny fonja izany ny fitondrana, saingy tsy nisy akony ka izao miafara amin’ny famerenana ny fitakiana izao indray.
Milaza ireo mpandraharaha ny fonja fa raha tsy misy ny famaliana izany fitakiana izany ao anatin’io 72 ora io, hisy ny fitokonana lehibe hataon’izy ireo, manomboka ny alatsinainy izao.
Toe-draharaha efa niseho ihany ny fitokonan’ireto sampandraharaham-panjakana ireto, ary hita ny voka-dratsiny. Iaraha-mahita rahateo ny fijalian’izy ireo amin’ny tsy fahampian’ny fitaovana, toy ny fiara fotsiny. Taterina amin’ny taxi-be ny voafonja entina hotsaraina, entina mandeha an-tongotra sns. Mbola mitazam-potsiny hatrany ny fanjakana, ny minisitera tompon’andraikitra. Ity farany izay nanisy tsindrim-paingotra fa tsy mahandry tantana ry zareo mpandraharaha ny fonja, fa efa nisy ny fifanarahana natao, fa ny fampiharana azy sisa.
Hitokona ihany koa ny mpirakidraharaha
Hanampy trotraka ihany, fantatra fa hitokona ny mpirakidraharaha ny fitsarana amin’io herinandro io, hanohy ny fitakian’izy ireo. Hisy ny fivoriambe hataon’izy ireo hanapahana ny anton’ny fitokonana. Anisan’izany ny fitakiana ireo zo sy tambin-karama ho an’ireo mpirakidraharaha rehetra. Ny eto Antananarivo no hanao azy io, kanefa araka ny voalaza iraisan’ny mpirakidraharaha rehetra mihitsy ny hetsika. Hanampy sy hanamafy ny hetsiky ny mpandraharahan’ny fonja izy ireo, raha ny filazan’ny solontenany.